Tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsôsialy Nahafa-po ny zava-bita nandritra ny 2017
CEPE Vonona ny fotodrafitrasa, vonona ny kilonga!
Hotanterahina rahampitso Talata fiandohan’ny volana Septambra ny fanadinam-panjakana CEPE taona 2020 ho an’Antananarivo sy Antsiranana.
COVID-19 : Voaaro kokoa ny vehivavy noho ny lehilahy ?
Araka ny nambaran’ny « Santé publique France », nandritra ny fisian’ny valanaretina covid-19, dia ny lehilahy no betsaka sy mora voan’ny covid-19 kokoa, mihoatra amin'ny vehivavy. Mitombina marina ve izany ? Toy izao ny fanazavana azo tao amin’ny « bulletin de santé publique France », ny 9 aprily lasa teo.
Ireo fahazarana atao any an-tsekoly, mba tsy hampiparitaka ny Coronavirus Covid-19 any an-tsekoly : Fadio ny mizara “gouter”, mifampindrana «stylo »,…
Toeram-pianarana miisa 4 eny Alakamisy Fenoarivo ankoatra ny oniversite pôliteknika eny Vontovorona no voakasik’ilay valan’aretina Coronavirus izay niparitaka teny an-toerana.
Ady amin’ny herisetra : Ankizy 1 amin’ny 4 no tsy mahatsiaro tena ho voaaro eo anivon’ny sekoly
« Omena endrika izay tsy azo tantaraina » ! Lohahevitra nitondrana ny famoahana ny tatitry ny fanadihadiana momba ny herisetra mianjady amin’ny ankizy, notontosaina ny talata lasa teo izany.
Tsy fihafiana ny manam-bady …
Vehivavy aho no mizara ny efa niainako eto amin’ny Jejoo anio. Te hanoro hevitra an’ireo vehivavy toa ahy aho, izay mihevitra fa fihafiana ny tokantrano.
Hanova anarana: inona avy ny taratasy ilaina? aiza no haleha?
Noho ny antony samy hafa dia mety tsy ho tiana ny anarana nomen’ny ray aman-dreny. Azo atao ny manova azy ireny, rehefa manao fangatahana any amin’ny filohan’ny fitsaràna ambaratonga voalohany. Atoro anao anio ny fanaovana izany.
Fa maninona ny vehivavy amin’izao no lasa tia mikolo ny hatsaran-tarehy ?
Tao anatin’ny 20 taona teo dia nisy fivoarana be teto Madagasikara, raha ny momba ny fikoloana ny hatsaran-tarehy. Efa maro isafidianana izao ny akora fikoloana tarehy hita eny an-tsena, hatrany anatin’ireny varotra amin’ny aterineto ireny. Matoa mihamaro izy ireny dia azo heverina fa mihaliana amin’izy ireny ny vehivavy malagasy. Inona tokoa no mety ho antony ?
Taom-pahombiazana ho an’ny CNaPS ny taona 2017 raha ireo zava-bitany hampahalalana ny momba ny fiahiana ara-tsôsialy no atao jery todika. Na izany aza anefa dia tsy mijanona hatreo fa maro ireo fanatsarana kasainy atao amin’ny herintaona. Tao Antsirabe, renivohitry ny faritra Vakinankaratra no nampiantranoina ny fanakatonana tamim-pomba ôfisialy ny taom-piasana 2017.
Nakatona ny fankalazana ny faha-60 taona
Nomarihin’ny CNaPS tamin’ity taona ity ny fankalazany ny faha-60 taona nisiany teto Madagasikara, izay nifanindran-dalana tamin’ny androm-pirenena natokana ho an’ny fiahiana ara-tsôsialy, ny 29 septambra. Niavaka tamin’izany, ny hazakaza-pirahalahiana sy ny firaisan-kina (na ny course de la fraternité et de la solidarité) izay nahenika ny faritany 6. Teo ny fitokanana ny “CEO” (Centre d’Ecoute et d’Orientantion) tetsy CNaPS 67Ha, ny loabary an-dasy nampitondraina ny lohateny hoe “Hay ve zany” ary ny fanasana fikambanana tanora sy olo-manan-kaja maro mbamin’ny fiarahamonim-pirenena.
Nanome tohana ho an’ny vondrom-paritra ny “CNaPS – MID”
Maro ny mpiasan’ny kaominina mandeha misotro ronono no tsy mandray CNaPS vokatry ny tsy fandoavany latsakemboka. Ny loharanom-bola miditra amin’ny vondrom-bahoakam-paritra no olana, ka mahatonga ny trosa miavosa, tsy hahefana izany. Noho izany, niroso tamin’ny sonia fifanaraham-piaraha-miasa i Mahafaly Solonandrasana Olivier, Praiminisitra sady Minisitry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, niaraka tamin’ i Arizaka Rabekoto Raoul, tale jeneralin’ny CNaPS, ny amin’ny fanomezana tohana ny mpitantana ny Kaominina. Distrika 82 sy kaominina 1 247 no nahazo tombontsoa tamin’izany ary mpandray anjara miisa 3 524 nahitana ben’ny tanàna, filohan’ny filan-kevitra kaominaly ary mpitam-bola na SCT (Secrétaire Trésorier Comptable). Eo amin’ny sehatra tsy miankina indray dia mpampiasa sy mpiasa miisa 2 810 no nomen’ny CNaPS fiofanana tamin’ny alalan’ny SASS (Service d’Actions Sanitaire et Sociale). Fiofanana 34 no tontosa raha atambatra tamin’ity 2017 ity.
Niara-miasa amin’ny fiangonana FLM sy FJKM
Natomboka tamin’ny 21 jona 2017 ny fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny CNaPS sy ny FJKM. Synodam-paritany 11 amin’ny 38 misy no voaofana ary nahatratra 844 ny mpiofana nahitana mpitandrina, mpitantana sekoly ary mpandraharaha amin’ny tetikasa samihafa toy ny SAF. Ny 9 oktobra 2017 lasa teo kosa no vita ny fifanaraham-piaraha-miasa teo ny amin’ny FLM sy ny CNaPS. Tanjona ny hanatsaràna ny fiahiana ara-tsosialy sy ny fisotron-dronon’ny mpiasan’ny FLM, izay ahitana pastora 1500, vehivavy téôlôjiana 250, katekista, toeram-pitsaboana miisa 40, hôpitaly lehibe miisa 10, mpandraharaha sy mpanabe maro an’isa miasa eny anivon’ny ny sekoly, izay tsy latsaky ny 700 isa manerana an’i Madagasikara. Ao koa ireo mpiasa manabe ireo jamba sy marenina, ary ireo miantsehatra amin’ny fambolena sy ny fiompiana. Hatreto dia ny FLM Maintirano sy Amboasary Atsimo no efa nahavitan’ny CNaPS tantsoroka amin’ny alalan’ny fiofanana mikasika ny maha-zava-dehibe ny fananana fiahiana ara-tsosialy.
Nanatona ny vahoaka
Isan’ny fandaharan’asan’ny CNaPS ny mamboly kolontsaina entina mampiroborobo ny fiahiana ara-tsosialy (na ny PPPS : Progamme de Promotion pour la Protection Sociale). Isan’ireo natonina manokana tamin’ity taona ity i Nosy Be Hell Ville sy ny Nosy Sainte- Marie, ary ny faritra Vatovavy Fitovinany sy SAVA. Samy nanaovana atrikasa niarahana tamin’ny mpitsara, ny sendika, ny fiarahamonim-pirenena, ny mpampiasa, ny mpiasa ary ny fikambanana maro samihafa ireo faritra ireo. Tanjona ny hahalalan’ny eny an-toerana ny zon’ny mpiasa sy ny adidin’ny mpampiasa. Ankoatry ny atrikasa moa dia misy ireo tranoheva izay natao hanakaiky kokoa ny vahoaka, satria mbola maro ny olona no matahotra miditra birao, rehefa hikarakara antontan-taratasy.
Nitokana birao sy tendro
Mikasika izay fanatonana akaiky ny vahoaka izay indrindra dia notokanana tamin’ity taona ity ihany koa ny birao 2 teto Antananarivo, dia ny tao Manjakandriana sy ny tao Anosizato. Miisa 02 ihany koa ny tendro notokanana tany amin’ny faritra, dia any Hellville sy ny any Vohémar. Tanjona amin’ireo tendro sy birao ireo ny hanakaikezan’ny mponina ny CNaPS sy hialany amin’ny fivezivezeny hamonjy ny masoivoho amin’ny renivohi-paritra, rehefa hikarakara antontan-taratasy momba azy.
Nanangana klioba CNaPS Zandriolona
Isan’ireo nahazo fanentanana momba ny fampahalalana ny maha-zava-dehibe ny fananana fiahiana ara-tsôsialy ihany koa ireo ankizy sy tanora eny anivon’ny sekoly. Tamin’ity taona ity izao dia sekoly miisa 17 no nananganana ny kleoba CNaPS Zandriolona ka 2350 isa ireo mpikambana ao anatiny raha 108 isa kosa ireo mpanabe, mpitarika.